Hub sharci darro ah oo lagu qabtay xeebaha Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Hub sharci darro ah oo lagu qabtay xeebaha Soomaaliya
Ciidanka Badda Mareykanka ee ku sugan xebaha Soomaaliya ayaa qabtay labo Doomood oo siday hub sharci darro ah.
MUQDISHO, Soomaaliya – Markabka USS Winston S. Churchill ayaa qabtay Labo Doomood oo laga soo buuxinay hub shari darro ah howlgal ay ciidanka Mareykanku ka sameeyeen xeebaha Soomaaliya 11 iyo 12-kii bishaa Febaraayo.
Labadaan Doomood ayaa loo soo ekeysiiyay kuwo sida shixnado ganacsi, waxayna ku fashilmeen in ay dhiibaan shartigooda ganacsiga ka hor inta aan la baarin.
Saraakiisha Markabka ayaa sheegay in Doonyahaan sideen hub aad u badan oo kala duwan una badan qoriga AK-47-ka loo yaqaan, RPG, BKM iyo kuwo kale.
Ciidamada Mareykanka ee ka howl-gala xeebaha Soomaaliya ayaa sheegay in ilaa hadda aysan caddayn cidda leh hubka, halka laga keenay iyo halka loo waday, halka Dowladda Soomaaliya ayaan wali ka hadlin arrintaan.